Inona ny Frequency Messaging Text Ideal? | Martech Zone
Inona ny Frequency Messaging Text Ideal?
Alahady, Jona 17, 2018 Alahady, Jona 17, 2018 Douglas Karr
Mety tsy misy fantsom-barotra mivantana kokoa ary misy fiantraikany fanavotana sy valiny tsara kokoa noho ny fandefasan-kafatra (SMS). Orinasa manao tsirambina ny mpikirakirany SMS dia hahita ny klioban-dry zareo mihena sy fidiram-bola miaraka aminy. Amin'ny faran'ny lafiny hafa, ny fanapoahana baomba amin'ny mpanjifa amin'ny hafatra dia mety hahasosotra azy ireo ary mety hiteraka fisoratana anarana marobe.
Ny pitsopitsony amin'ny antsipirihany momba ny varotra SMS dia manome fomba fijery tsara momba ny fihetsiky ny mpamandrika, ao anatin'izany:
Ahoana ny fandrefesana tsara ny sanda andavanandron'ny mpamandrika SMS.
Ahoana ny fomba hahazoana fanekena araka ny tokony ho izy amin'ny tsena amin'ny alàlan'ny SMS amin'ny lisitry ny mpanjifa.
Ahoana ny fikarohana izay tadiavin'ny mpamandrika lahatsoratra ary impiry izy ireo no maniry izany.
Ahoana ny fomba fametrahana metric key sy handrefesana tsara ny valiny.
Ny mpivarotra mifototra amin'ny alalana dia tokony handanjalanja ny hafatry ny fandefasan-kafatra, ny habetsany amin'ny ankapobeny ary ny tolotra hahazoana antoka fa manome lanja ireo vinavina izy ireo. Raha mila fahitana kely ianao amin'ny fananganana fanentanana amin'ny marketing amin'ny SMS mahomby, dia misy lahatsoratra iray hafa momba ny Singa 6 manan-danja amin'ny marketing amin'ny hafatra an-tsoratra.
Amin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra amin'ny SMS, dia mety ho zava-dehibe kokoa noho ny fampahalalam-baovao hafa ity satria manome fahazoan-dàlana hiditra amin'izy ireo manokana ny mpamandrika. Neon SMS, orinasam-pivarotana lahatsoratra betsaka eto Irlandy, no namorona ity sary ity - Ahoana ny fomba ahazoana ny mizana marina amin'ny marketing amin'ny SMS mba hanomezana torohevitra, statistika ary paikady vitsivitsy hanatsarana ny paikadinao amin'ny fandefasan-kafatra.
2018: Ahoana ny fampiasan'ny orinasa sy ny mpanjifa ny media sosialy